﻿Komputermen စာမျက်နှာ 4
ဘယ်လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုယိုယွင်းဖိုင်တွေ c ကို restore လော
ယနေ့အကြီးအကျယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာမော်ဒယ်တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့မူလတန်းနည်းလမ်းအဖြစ် SD က-မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ ဒေတာ, သူတို့အပျေါမှာသိမ်းဆည်းထားကင်မရာများ၏လုပ်နှင့်မော်ဒယ်အညီကွဲပြားခြားနားပေမယ့်စည်းကမ်းအတိုင်း, သို့သော်အမှားနှင့်ဆုံးရှုံးမှုမှလုံးဝကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်သောအလားတူအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။ သောထိုပုံစံများ ထုတ်လုပ်သူများအသုံးပြုခြင်းသည်များစွာသောလမ်းညွှန်ချက်များကြောင့်ချွတ်တဲ့အခါမှသာပျက်စီးစေအချက်အလက်များ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်သို့မဟုတ် device အတွက် install လုပ်ပြီးကြောင်းအလေးပေးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သုံးစွဲသူအများအပြားကဤသတိပေးခကျြကိုလစျြလြူရှုနှင့်တစ်ဦးပျက်စီးကြောင်းဓါတ်ပုံတွေ၏စည်း, သူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုရ။ သို့သော် SD ကကဒ်၏မသငျ့လျြောကိုင်တွယ်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကင်မရာကိုလုံးဝပစ်ခတ်မှု၏ဖြစ်စဉ်သို့တိုက်ရိုက်ဆင်းတဲ့အခါမကြာခဏပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း, တခါတရံတွင်ကဒ်ပြားကိုမဆိုသိသာအကြောင်းပြချက်မပါဘဲလေယာဉ်ပျက်ကျပေးပါ။ ရလဒ်အဖြစ်တစ်အားလပ်ရက်အပြီးအိမ်ပြန်, အစားဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့ကင်မရာကိုပိုင်ရှင်အတွက်နှိပ်အမှတ်တရများရာပေါင်းများစွာဖတ်လို့မရအောင်ဖိုင်တွေနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးမှတျဉာဏျတွေ့ရှိ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရှိသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မဟုတ် - ထိုထင်ရသောအသုံးမပြုနိုင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်မှာ data ကိုမကြာခဏပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ ဒီနေရာမှာဘယ်လိုရဲ့။ လိုအပ်သော tools တွေကို သငျသညျပျက်စီးသွားသော SD က-card ကိုမှဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်လဲ tutorial များများရှာတှေ့နိုငျအင်တာနက်ကို, ဒီစာသားထဲမှာငါသုံးအခြေခံပညာယူဆချက်ကနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း :သင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးက Windows ဖြစ်ကြောင်း, သင်ကနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်များစွာသောညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာဘို့အပိုအချိန်မရှိဘူး ။ ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးအလွန်မြန်ဆန်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြေရှင်းချက်ဆက်ကပ်ချင်တယ် - Zar X ကိုစနစ်များပြန်လည်နာလန်ထူ software ကို ကိုခေါ်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အလွန်အသုံးဝင်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tool ၏အပြည့်အဝဗားရှင်း (တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်လိုအပ်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သော) ပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool တစ်ခုအတွက်အခကြေးငွေဖြစ်သော်လည်းထိုသရုပ်ပြဗားရှင်းလုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ program ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ပြီးနောက်, သင်ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်မှပြန်လည်ကောင်းမွန်ဒေတာချွေတာဘို့သင့်ဒေသခံ disk space ကိုအပေါ်လုံလောက်တဲ့ရှိသည်သေချာပါစေ။ ၎င်းသည်သင်၏ကဒ်ကို 16 GB အထိဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ hard disk ပေါ်မှာနေရာလွတ်များနှင့် ပတ်သက်.
ငါဘယ်လို Touch ကို
မင်္ဂလာပါ။ vKontakte မှတ်ပုံတင်ဖို့လာတဲ့အခါငါမှတ်ပုံတင်ရေး code ကိုလက်ခံရရှိရန်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီဖုန်းနံပါတ် (ပုံဒီအလိုအလျှောက်ဖြစ်ပျက်) လိုင်းက e-mail ကိုလည်းပြသပါလိမ့်မည်, ငါမူကားဤဆိုအရေးပါပုံကို attach နှင့်တက်လက်မှတ်မထိုးခဲ့ပါ။ အခုတော့လိုင်းက e-mail ကိုအပေါ်ဆိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်, ငါချင်ကြပါဘူး။ ငါဒီလိုင်းမှာစတင်မိတ်ဆက်ကြောင်းဘယ်လိုပြုကြဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမက, သင်၏ e-mail, ဆိုလိုသည်မှာ, e-mail, လိပ်စာလဲ?
Programs ကို UltraVNC တို့ - တအားကောင်းတဲ့, သင်မူကားအဝေးမှအခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လျှောက်လွှာ။ အဆိုပါအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေရင် LAN သို့မဟုတ် WAN ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်။ အဆင့်အတန်းများ၏အခမဲ့ဖြန့်ဝေနှင့်အတူဒီ tool ကသငျသညျကိုသူ့အဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြမယ်ဆိုရင်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်အခြား PC ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်၏အသုံးပြုမှုကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ သင်ကနုသေး ကူညီပေးဖို့ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးနိုင်သည်အချို့သောကွန်ပျူတာကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးပြုသူများသည်။ အရှင်ကမ္ဘာမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်ဆောင်။ SingleClick ထို့အပြင်အသုံးပြုခြင်း, အသုံးပြုသူသင်တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူဤသို့ပွုနိုငျသညျ, pre-install လျှောက်လွှာကိုမှမလိုအပ်ပါဘူး။ အင်္ဂါရပ်များ အစီအစဉ်ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျရရှိနိုင်ဗီဒီယိုကားမောင်းသူ utility ကိုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် app ကိုကူးစက်သတင်းအချက်အလက်များ encrypt လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပွငျ, စာသားချက်တင်လည်းရှိ၏။ ထို့အပြင် tool ကိုတစ်ဦးကြည့်ရှုသူ toolbar ကိုရှိပါတယ်။ လျှောက်လွှာ၏ထိပ်တွင်ကြည့်ရှုဘို့အလိုအလျှောက်မှုကြီးလျှော့ချပြတင်းပေါက်ဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို client ကွန်ပျူတာ၏တန်ခိုးကို အသုံးပြု.
3 operating system ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏အဓိကအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့မရှိရင်တောင်မှပဲကွန်ပျူတာကိုဖွင့်မဖြစ်နိုင်ချေ။ ပိုပြီးရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့စက် (ခလုတ်, icon များ, ပြတင်းပေါက်များ, မြှား, etc) ကိုဖွင့်သောအခါမွငျနိုငျသောရုပ်ပုံသည်, တစ်ဦး operating system ကို။ စည်းကမ်းအတိုင်း, အားလုံးဆုံးလိုအပ်သောနှင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များစနစ်မျက်နှာပြင်၏အစအဦးမှာတည်ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြွေပြားမျက်နှာပြင်အသုံးပြုသူရဲ့အဆက်အသွယ်များ, မိမိအဖိုလ်ဒါ, applications များ, ဓာတ်ပုံများ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များချိတ်ဆက်နေသည်။ ဒါဟာသင်အမြဲ up to date ဖြစ်နေဖြစ်ခွင့်ပြုနှင့်အချိန်ရှာဖွေတွေအများကြီးမဖြုန်းကြပါသောသူအပေါင်းတို့ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူ, အီလက်ထရောနစ်ပြုပြင်စာအုပ်တွေထုတ်လုပ်ရာကောင်းတစ်ဦးဝန်ဆောင်မှု, ရှာတှေ့နိုငျသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးတေးသွားကိုနားမထောငျ။ $ ရှိလြှငျ, တစ်ရူဘယ်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူသည် Windows ကိုခေတ်သစ်လည်ပတ်မှုစနစ်များတစ်ပုံစံဖြစ်သည်။ အလုပ်၏အကူအညီနှင့်အတူ 2012 ခုနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာစာရင်းများအရအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများအကြောင်းကို 92% ။ အဆိုပါအရာကအများဆုံးရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကို, XP, 95, 98, Vista, 2000, NT, Windows7ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နေ့စွဲဖြစ်ပါသည် - Windows ကိုတော်တော်များများဗားရှင်းရှိပါတယ်။ XP ကို​​ဗားရှင်းအများဆုံးခေတ်သစ်သည်မဟုတ်, အဲဒါကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အစာရှောင်သောကြောင့်ထိုသို့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သောတည်းဖြတ်မူများကိုလုပ်လာသောအခါ Excellent ကအလားအလာမျှော်လင့်ထားနှင့် Windows7စနစျ။ Windows ကိုအထုပ်ထိုကဲ့သို့သောက Internet Explorer, Outlook Express, ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုကစားသမားအဖြစ် "စံ" ပလီကေးရှင်း၏အရေအတွက်များပါရှိသည်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုထုတ်ကုန်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြန့်ဝေနေကြသည်နှင့် Microsoft က website ကနေ download နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံသူတို့၏တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည့် Windows တစ်လိုင်စင်ရ version ကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Operating System ကိုအောက်မှာ program ကို run emulator က Windows ပတ်ဝန်းကျင်သုံးပြီးနိုင်ပါသည်။ နေ့စွဲစေရန်, အခြား operating system အလွန်နည်းပါးကြသည်။ သာမန်အသုံးပြုသူများအများထဲတွင်သူတို့များသောအားဖြင့်ပေါ်ပြူလာမရှိကြပေ။ Linux ကိုစနစျကိုမကြာခဏပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်မာများကပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Windows operating system sitehttp သော, laptops တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံ://remobi.
Windows 8 ကိုတည်ဆောက် 8064:ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် screenshots
screenshots များသတင်းများအရ Windows 8 ကိုတည်ဆောက် 6.
Windows ကို 10, 8.1 နှင့်7Rainmeter
လူအများစုက desktop ပေါ်မှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည် Windows7ကို gadgets, အချို့ကိုမကြာခဏလှပအသုံးဝင်သော Widgets တွေ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး (ဖြည့်စွက်, Windows ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့ပရိုဂရမ်က Windows 10 ပစ္စည်းတွေကို download လုပ်ပါမှ, ဒါပေမယ့်အများကြီးမလူသိများသည်ဘယ်မှာရှာကြ၏ ) က Rainmeter အဖြစ် Desktop ပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်အကြောင်းယနေ့နှင့်ကျွန်တော်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Rainmeter - သင်သည်သင်၏ desktop ပေါ်မှာ Windows ကို 10, 8.
Windows7ကိုထင်ရှားကြောင်း Snap feature ကိုအသုံးပြုသူများမျက်နှာပြင်၏နှစ်ဖက်နှင့်ထောင့်မှ applications များသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက် pin ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသင်၏ desktop ပေါ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပွင့်လင်းအများအပြားပြတင်းပေါက်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနှင့် alignment ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိရင် - Windows 10 ကိုအရာအားလုံးသူ့ကိုယ်သူပြုလိမ့်မည်။ ကြောင်းတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ယခင်ဆောင်းပါးထဲမှာအသေးစိတ်ကိုပြောသည် "က Windows 10:အသစ်တစ်ခုအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြတင်းပေါက်" ။ Snap Assist အလိုအလြောကျ ;